Azafady mifidy ny teny
Ny famintinana ny ady Yemen
In 2015 ary rehefa afaka ny filohan'ny Yemen sy ny fametraham-pialan'ny afa-mandositra avy any Yemen, tsy mitovy velively hiady tamin'i Yemen tamin'ny napetrak'i Arabia Saodita sy Emirà Arabo Mitambatra. Eoropeana sy ny fitondram-panjakana Amerikana nahatonga heloka bevava mahatsiravina manohitra ny tsy nanam-piarovana Yemenita olona izay an'arivony ankizy sy ny olon-tsotra no maty, avy amin'ny fivarotana fitaovam-piadiana sy ny fanohanana Arabia Saodita fa tsy fisorohana sy fanelanelanana momba ity olana ity. Ireo heloka bevava dia tsy vitan'ny hoe voafetra ho fanafihana ara-miaramila, fa Arabia Saodita nanodidina ny tany, rivotra, sy ny ranomasina any Yemen mba hanakanana ny fidirana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina any amin'ny firenena, izay atahorana ho lany tamingana ny fiainan'ny olona an-tapitrisany. Araka ny tatitra avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena, these crimes have been the worst humanitarian disaster in the last few decades and caused hunger and started diseases like cholera.
Miaraka amin'ny famoahana ny vaovao sy ny sary ireo heloka bevava ao amin'io tranonkala, efa niezaka ny mampahafantatra ny olona ny heloka bevava ireo izay niaraka tamin'ny fanaovana ankivy Saodiana tohanan'ny masoivohom-baovao, mba hamaranana ity ady mitovy amin'ny hetsi-panoherana avy amin'ny manerana izao tontolo izao.
Ampidiro ny mailaka mba haharaka ny vaovao farany sy hanohana ny vahoaka Yemenita